Unboxing nke ịrịba Parrot Zik 2.0 nke Starck | Akụkọ akụrụngwa
Unboxing nke ịrịba Parrot Zik 2.0 nke Starck
Juan Colilla | | Ngwa, Ngwa, General, Ngwa agha, Ndị na-egwu egwuregwu
Anyị na-ekpughe igbe nke Icheku Zik 2.0, okpu agha dị elu nke na-emeghị ihe ọ bụla karịa ịtụnanya anyị, site na mgbe anyị wepụrụ ha n'igbe ahụ ruo mgbe anyị tinyere ha ịnwale ha.
Okooko a maara n’oge na-adịbeghị anya maka ọrụ ya mara mma mgbe ọ na-arụpụta ma na-ere ahịa drones nkịtị, ngwaọrụ ndị na-achịkwa ime ihe ọchị na-atọ ọchị na-eto eto na ndị agadi, Otú ọ dị anyị agaghị echefu na otu ụbọchị ọ maara maka ọrụ ya na-eke akụrụngwa «aka n'efu» na ọdịyo .
Okpu agha a na-egosipụta ahụmịhe ha nwetara n'ime afọ ndị ahụ niile, ha na-egosipụta ịdị mma na-enweghị ịwepụ ha na igbe ahụ, mgbe ahụ ị nwere ike ịlele nhazi na ọrụ ha maka onwe gị.
1.1 Aka akara obubọk
1.2 Nchọpụta isi
1.3 Nkagbu na-eme mkpọtụ (ikike iche)
1.4 Ọnọdụ Street
1.6 HD ekwentị
1.7 Ọrụ na-enweghị ntụpọ na-enweghị wires
1.8 Onwe ya
Dịka ị hụgodi na vidiyo ahụ, okpu agha ndị a juputara na ọrụ nke mere ka ha pụọ ​​iche dịka ha pụrụ iche, ọ ga-amasị m inyocha ha niile n'ụzọ miri emi maka ndị na-ahụbeghị vidiyo ahụ ma ọ bụ ndị chọrọ ịbanye n'ime ha. ya mere, aga m ahapụ:
Na ntị ntị aka nri anyị nwere a capacitive elu nnukwu nha nke na-enye anyị ohere igosipụta mmegharị ahụ dị nro na ya, site na okpu agha ndị a, zipụ iwu na ngwaọrụ anyị (transmitter ọdịyo), ihe atụ nke ha bụ ndị a:
Metụ akụkụ etiti ka ịkwụsịtụ / kpọọ egwu.
Swipe na-aga n'ihu iji gaa egwu / azụ na-esote iji gaa abụ gara aga.
Nọgidenụ na-enwe mkpịsị aka na-emetụ akụkụ dị iche iche nke isi aka ịkpọku onye enyemaka na-akwado ya (Siri na iOS, Google Ugbu a, Samsung Voice, ma ọ bụ ihe ọ bụla ị kenyere na Andoid)
Ọ bụrụ na ha kpọọ gị, iji mmetụ aka ị ga-akpọ oku ahụ, ọ bụrụ na ijide 2 sekọnd a jụrụ oku ahụ.
Iji chịkwaa olu, slide mkpịsị aka gị elu (iji mụbaa) ma ọ bụ ala (iji belata).
Parrot Zik 2.0 nwere ihe mmetụta dị iche iche na - enyere okpu agha aka mara ma ọ bụrụ na ha dị n'elu isi gị ma ọ bụ ọ bụrụ na ị wepụpụrụ ha, n'ụzọ dị otú a ma ọ bụrụ na mmadụ agwa gị okwu ma ọ bụ na ịchọrọ ime ihe ọ bụla ma ị ga-ewepụ ha, ị ga-agbadata ha n'olu gị ma ọ bụ wepụ ha ka egwu ahụ kwụsịtụ na ya nwere, ozugbo i weghachitere ha, egwu ahụ ọ ga-egwu na-akpaghị aka site na ebe ọ kwụsịrị.
Nkagbu na-eme mkpọtụ (ikike iche)
Isii nke igwe okwu ya raara mgbalị ha weghara ụda ndị dị na mpụga nke nwere ike igbochi ahụmịhe ụda gị, na -emepụta ebili mmiri dị iche na ntị gị ka ị ghara ịchọpụta na ha mere, n'ụzọ dị otú a ị na-ege egwu kachasị amasị gị ma ọ bụ olu oku na-enweghị Gburugburu ebe obibi na - egbochi ihe omume gị, nkewapụrụ iche nke ọma nke m ji eto Parrot.
Otu ọnọdụ n'ime «mkpọtụ mkpọtụ mkpọsa» ọrụ nke parrot nwekwara patented bụ «Street Mode», na ọnọdụ a anyị nwere ike ịnụ ụtọ ịkagbu mkpọtụ na-arụ ọrụ ọbụlagodi n'okporo ámá, usoro ọgụgụ isi na-elekọta amata ụda dị mkpa maka onye ọrụ, dị ka olu nke onye dị nso na ịkọpụta na / ma ọ bụ mepụtagharịa ha nke ọma ka gị, ebe ị nwere ekweisi gị ma gee egwu, ị nwere ike ịnụ onye nke ọzọ n'ụzọ zuru oke.
Na icheku Zik 2.0 nwere ikike imeghari ọdịyo dịka usoro dị na ngwa gọọmentị, inwe ike ịhọrọ ọnọdụ nke isi iyi egwu ma imitateomie ụda nnukwu ụlọ egwu egwu, otu ụlọ jazz, ụlọ nzukọ nkịtị na ọbụna ụlọ ịgbachi nkịtị
Kedu otu ọ ga - adị ma ọ bụghị, The Parrot Zik 2.0 bụ usoro enweghị aka zuru oke nke ọgbọ ọhụụ, usoro a na - eme site na mgbe anata oku dị egwu; Anyị na-amalite ịnata oku ahụ, n'oge a, ka anyị wee wepu ekwentị site n'akpa anyị, okpu agha ahụ gụọ ndepụta kọntaktị gị ma mata onye na-akpọ gị wee gụọ aha onye ahụ n'olu dara ụda na nke ọma Nwere ike ikpebi ma ị ga-ewere ya ma ọ bụ na ị gaghị ewere ya.
Mana ọ kwụsịghị ebe a, ka anyị were ya were, anọ nke igwe okwu ya asatọ na-etinye ike ha niile na oku a, n'otu oge na-etinye olu gị na ụda nwere ike igbochi oku ahụ, n'ụzọ dị otu a mezuru ihe abụọ, nke mbụ bụ na olu gị na-ada ụda nke ọma na nke abụọ bụ na mkpọtụ mpụga agaghị emetụta ọkpụkpọ ahụ ka ị nọrọ naanị gị, gị na onye na-eme gị. Dị ka a ga - asị na ihe a niile ezughi, ha nwere ihe mmetụta nkwonkwo ọkpụkpụ, yana ihe mmetụta a ọ bụ ọrụ maka ịchọpụta ịma jijiji nke agba gị mgbe ị na - ekwu okwu, ị ga - eche ihe kpatara ya, n'ihi na ọ dị mfe, maka nke a Parrot Zik 2.0 na - egbochi ụda olu gị dị ala, na - ezipu ụda, ụda okike ọbụlagodi mgbe ikuku na - eku.
N’ihe niile a, ị ga-eche na onye ị na-agwa okwu nọ ya n’akụkụ.
Ọrụ na-enweghị ntụpọ na-enweghị wires
Icheku Zik 2.0 dakọtara na akara ekwentị niile dịnụ, ha nwere mkpado NFC na aka ekpe aka ekpe iji kwado njikọta na njikọ Bluetooth 3.0 maka nnyefe ọdịyo ikuku, n'ụzọ dị otu a anyị nwere ike ịnụ ụtọ egwu anyị na-enweghị agbatị. Don'tnweghị Bluetooth? Echegbula, ha nwere a 3mm jaak njikọ (atọ okporo osisi), ndị kasị etozu na usoro nke ọdịyo iji hụ unmatched ndakọrịta.
The Parrot Zik 2.0 nwere ụdị dị iche iche 3 ga-eme ka nnwere onwe zuru ezu maka ọnọdụ ahụ, ma ị na-aga ije ma ọ bụ ụgbọ elu dị anya:
Modedị nkịtị: Bilie Awa 6 Bluetooth ọdịyo playback na ANC (ifịk mkpọtụ kagbuo) na spatialization nyeere.
"Eco" mode: Bilie Awa 7 ọkpụkpọ ọdịyo site na ntinye jack na ANC na spatialization arụ ọrụ.
Plagbọelu mode: Bilie Awa 18 audio playback site na ntinye jack na ANC nyeere.
Na mgbakwunye na ọrụ ndị a niile, ngwa dị na AppStore na Google Play ebe anyị nwere ike hazie ha ka ọ masịrị anyị ma megharịa / kwụsị ha dị ka mkpa anyị si dị, anyị na-eche ihu anụ ọhịa n'ezie na usoro nke mmeputakwa ọdịyo. gafere okpu ọ bụla nke akara Beats na ịnọ n'ogo nke oke dị ka Bose na ndị ọzọ, na-enweghị mgbagha na akwụkwọ ha na-ekwe nkwa ọtụtụ ihe, ugbu a naanị anyị ga-ahụ etu ha si akpa agwa na ndụ n'ezie, nke anyị ga-ewetara gị n'oge na-adịghị anya nyocha vidiyo na blọọgụ a na nke m ga-ebipụta njikọ na edemede a, nọrọ na-ege ntị n'izu na-abịa!
Maka ndị na-achọghị ichere, Icheku Zik 2.0 ha adịworị ire ere na agba: ojii, ọcha, mocha, acha anụnụ anụnụ, oroma na odo. Iji nweta nke gị, naanị ị ga-aga ụlọ ọrụ gọọmentị Parrot n'ịntanetị, ebe ha dị maka € 349.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Unboxing nke ịrịba Parrot Zik 2.0 nke Starck
Ngwaọrụ 5 iji hụ iguzosi ike n'ezi ihe nke diski CD ma ọ bụ DVD gị na Windows
Usoro: Otu esi enweta Windows boot dị ọcha